Downloads 22 457
Munyori: Alphasim & Steve Hess https://sites.google.com/site/shess0757/
Updated musi 03 / 11 / 2012: Kururamiswa pamusoro injini utsi vakanga hwakaratidzwa vertically pachinzvimbo yakatambarara. Hekuno Alphasim B-52 Bombardier zvakachinjwa kuti FSX SP2 / P3D kunosanganisira mhando mbiri B-52G uye B-52H matanhatu textures, zvinosanganisirawo Murovedzi Ane 3D Cockpit (VC) uye 2D tsika unorira pamusoro B-52. Press Ctrl + W kuvhura bhomba Bay uye Shift + E nokuti vashandi tsotsonya (ona bhuku kuti uwane ruzivo). Zviri muchina guru kwazvo uye unofanira ichibhabhamisa nokuda yasimuka, kunyanya kana uri mhosva zvizere reparafini. Zvinosanganisira Animations su | sezvo vakagarwa co-mutyairi, utsi, kuchinja mapapiro etc. Yave ane yepamusoro ndege womuenzaniso wich zvakawanda zvine musoro.
The Boeing B-52 Stratofortress ari kumberi, subsonic, ndege-simba inokosha bhomba. The B-52 yakagadzirirwa uye yakavakwa Boeing, avo vakaramba kupa rutsigiro uye upgrades. Rave vakavhiyiwa neUnited States Air Force (Akatombo) kubvira 1950s. The bhomba anotakura kukwira 70,000 makirogiramu (32,000 kg) zvombo.
Kutanga anobudirira kondirakiti bhidha muna June 1946, ari B-52 Design hwakabva yakarurama-bapiro ndege simba nokuda matanhatu turboprop injini kuti kwokupedzisira zvikabva yb-52 pamwe sere turbojet injini akavakukura mapapiro. The B-52 akatora kutiza rwayo muna April 1952. Akavaka kutakura zvombo zvenyukireya nokuda Hondo Yemashoko-nguva pasava mishoni, ari B-52 Stratofortress chakatsiva Convair B-36. Kunyange zvazvo musoja hondo anoverengeka, Stratofortress aregedza chete akawanda munitions muhondo. zita rayo Stratofortress haawanzopiwi kushandiswa kunze pamutemo achinzi; yave chaitaurwa Air Force vashandi sezvo Buff (Big Ugly Fat / Flying Fucker / Fellow).
The B-52 yave vari muchiuto pamwe Akatombo kubva 1955. The Ndege yakabhururukira pasi Strategic Air Raira (Sac) kusvikira disestablished muna 1992 uye ndege yayo woga kupinda Air Combat Command (ACC); muna 2010 zvose B-52 Stratofortresses zvaitambidzwa kubva ACC itsva Air Force Global Urayai Raira (AFGSC). Mukuru waivako panguva yakakwirira subsonic aimhanya uye huri pasi anodawo mari ndachengeta B-52 mubasa pasinei kwatombova ndege akazotevera, kusanganisira akadzima Mach 3 North American XB-70 Valkyrie, uye shanduka-geometry Rockwell B-1B Lancer, uye nokunyangira Northrop Grumman B-2 noMweya. The B-52 akacherekedza rayo 50th gore kwechiropa basa rayo opareta muna 2005 chepakutanga uye pashure pokunge upgraded pakati 2013 uye 2015 zvichaita kushumira munzvimbo 2040s. (Wikipedia)
Boeing B-52 Stratofortress Alphasim FSX SP2 & P3D Download
Downloads: 119 278
Downloads: 43 179
Downloads: 47 752
Downloads: 87 937
Downloads: 38 546
Downloads: 63 347
Downloads: 45 579
164 Repaints Collection Pack nokuda default B737-800 FSX & P3D
Downloads: 122 757